တစ်ပတ်အတွင်း နှုတ်ခမ်းနီအချောင်းရေ တစ်သောင်းကျော် ရောင်းထွက်ခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာမဆုံးဖြစ်နေတဲ့ နေခြည်ဦး – Suehninsi
နေခြည့်ကိုတော့ လှအပနဲ့ပတ်သက်ရင် အမျိုးသမီးထုကြီးက အတော်လေးကို ပြည့်ပြည့်ဝဝယုံကြည်ကြပါတယ်။ သူမ review ပေးလိုက်တဲ့ အလှကုန်တိုင်းဟာ ပစ္စည်းပြတ်လပ်တဲ့အထိကိုရောင်းရခဲ့တာ ရှေ့မှာလည်းသက်သေတွေအများကြီးပါပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း သူမ review ပေးခဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးဟာ တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲ
အချောင်းရေတစ်သောင်းထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ကိုယ့်ကြောင့်အခုလိုရောင်းအားတွေကောင်းလာတာမို့ နေခြည်ကလည်း အရမ်းကိုပျော်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုချစ်တဲ့ Chillies တွေကလည် နေခြည် Review ပေးတာနဲ့ တန်းခနဲဝယ်ကြသူတွေမို့ နေခြည်ကိုယ်တိုင်လည်း Quality ကောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုပဲ
သေချာစိစစ်ပြီး review ပေးခဲ့တာပါ။ပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ” အရမ်းပျော်တာပေါ့လို့ နေခြည် LIVE review လေး ပေးဖြစ်တဲ့ Lipsticks လေးတွေက တစ်ပတ် အတွင်း အချောင်းရေ (၁၀,၀၀၀) တောင် ရောင်းထွက်သွားတာတဲ့။ အဲ့ live တုန်းက giveaway တွေလည်း အများကြီးပေါက်ကြ lipsticks
လေးတွေလည်းဆိုးကြည့်တာ အရမ်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ good reviews တွေကြီးပဲနော်။ တစ်ပတ်အတွင်း အချောင်း တစ်သောင်းဆို ဒီနှစ်မကုန်ခင် အချောင်းရေ တစ်သိန်းရောင်းရပါ စေလို့ ရင်ထဲအသဲထဲက ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်။ ဒါနဲ့ နေခြည်အခုဆိုးထား lipstick အရောင်လေးက ဘာလေးဖြစ်မလဲ chillies? ” ဆိုပြီး နေခြည်က ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။
နခွေညျ့ကိုတော့ လှအပနဲ့ပတျသကျရငျ အမြိုးသမီးထုကွီးက အတျောလေးကို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝယုံကွညျကွပါတယျ။ သူမ review ပေးလိုကျတဲ့ အလှကုနျတိုငျးဟာ ပစ်စညျးပွတျလပျတဲ့အထိကိုရောငျးရခဲ့တာ ရှမှေ့ာလညျးသကျသတှေအေမြားကွီးပါပဲ။ ဒီတဈခေါကျမှာလညျး သူမ review ပေးခဲ့တဲ့ နှုတျခမျးနီလေးဟာ တဈပတျအတှငျးမှာပဲ
အခြောငျးရတေဈသောငျးထိရောငျးခနြိုငျခဲ့ပါ တယျ။ ကိုယျ့ကွောငျ့အခုလိုရောငျးအားတှကေောငျးလာတာမို့ နခွေညျကလညျး အရမျးကိုပြျောနခေဲ့ပါတယျ။ သူမကိုခဈြတဲ့ Chillies တှကေလညျ နခွေညျ Review ပေးတာနဲ့ တနျးခနဲဝယျကွသူတှမေို့ နခွေညျကိုယျတိုငျလညျး Quality ကောငျးတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုပဲ
သခြောစိစဈပွီး review ပေးခဲ့တာပါ။ပြျောရှငျနတေဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ” အရမျးပြျောတာပေါ့လို့ နခွေညျ LIVE review လေး ပေးဖွဈတဲ့ Lipsticks လေးတှကေ တဈပတျ အတှငျး အခြောငျးရေ (၁၀,၀၀၀) တောငျ ရောငျးထှကျသှားတာတဲ့။ အဲ့ live တုနျးက giveaway တှလေညျး အမြားကွီးပေါကျကွ lipsticks
လေးတှလေညျးဆိုးကွညျ့တာ အရမျးကွိုကျတယျဆိုတဲ့ good reviews တှကွေီးပဲနျော။ တဈပတျအတှငျး အခြောငျး တဈသောငျးဆို ဒီနှဈမကုနျခငျ အခြောငျးရေ တဈသိနျးရောငျးရပါ စလေို့ ရငျထဲအသဲထဲက ဆုတောငျးပေးလိုကျတယျနျော။ ဒါနဲ့ နခွေညျအခုဆိုးထား lipstick အရောငျလေးက ဘာလေးဖွဈမလဲ chillies? ” ဆိုပွီး နခွေညျက ဝမြှေခဲ့ပါတယျ။